Gmail for iOS uthola update enkulu kodwa abasebenzisi ungajabulile - Izindaba Rule
Gmail for iOS uthola update enkulu kodwa abasebenzisi ungajabulile
INTERNET NOGOLIYATHI Google ukhiphe update esiyinhloko lokusebenza layo Gmail for iOS ukuthi ekugcineni kuletha ukuvuselela iklayenti imeyili, kodwa abasebenzisi bayo bona abajabuli ngakho.
Google umemezele update ngoLwesithathu, okwembula ukuthi Gmail for iPhone and iPad manje uqhosha isici ingemuva vuselela, okusho ama-imeyili kuyoba “pre-Okuyihaba” futhi ukulungele ukubuka lapho uvula lokusebenza.
Google isofthiwe engineer Melissa Dominguez kusho a post blog izolo, “Noma ngabe i-imeyili yakho into yokuqala ekuseni noma njengoba ubhekene emgqeni esitolo, ufuna ukuthola imiyalezo yakho ngokushesha ngangokunokwenzeka. With update wanamuhla-Gmail iOS App, kulula ukwenza lokho kanye.”
Lesi sici omusha udinga iOS 7, kanye nabasebenzisi uyophinde kudingeka ube “ingemuva lokusebenza Ukuvuselela” esitshalweni. Nokho, abanye bangase ungafuni ukusihlupha, nabasebenzisa lokusebenza update usheshe ukuze nimkhalele phezu esitolo lokusebenza, nabathile ethi kulimaza zabo impilo yebhethri.
Omunye umsebenzisi Gmail okungajabulisi ekhaya wathi, “Lolu update kwakuhlanganisa lokusebenza background zokuqabuleka futhi wabulala impilo yebhethri kwami ​​ngokushesha kakhulu. Ezinye izindaba zika-app namanje omuhle, kodwa kwadingeka ukuvala ukuvuselela ngenxa battery yami.”
I-Gmail for iOS update futhi kuhambisana ukwesekwa ngemvume yonkana multiple zokusebenza ze-Gmail iOS kanye nezinsizakalo.
“Uhlelo lokusebenza le-Gmail futhi manje isekela ngemvume ku-Google yonkana iOS zokusebenza, okubala Amamephu, Drive, Youtube kanye Chrome,” -Google wachaza. “Ngena ngemvume komunye, futhi uzoba ungene ngemvume ukuze wonke (lokhu futhi osebenzela i Uyaphuma). Ngakho ngeke ube uthayiphe ukuthi iphasiwedi 27-uhlamvu noma ukuthola ikhodi yakho yokuqinisekisa 2-step ngaso sonke isikhathi indlela kolunye uhlelo lokusebenza lwe-Google.”
Nokho, abasebenzisi happy kakhulu ngalokhu noma, futhi abanye bathi isici ayisebenzi.
“Njengoba ngiye olusha lokusebenza ukuthi ayisekho ngemvume nami futhi kungcono a lot kancane kunendlela ngaphambi update,” umsebenzisi oyedwa miffed wabhala.
Lesi sihloko, Gmail for iOS uthola update enkulu kodwa abasebenzisi ungajabulile, is yedlanzana kusukela obuzayo futhi posted lapha nge imvume.
20799	0 App Store, Gmail, Google, obuzayo, iOS, iPad, iPhone, -YouTube
← 10 Esiphumelelako Izixazululo Natural For Heart Diseases 'Alukho ushintsho’ zisesimweni Schumacher →